Xildhibaan Run-Sheeg “Raadinta Doorasho Dadweyne micnaheedu ma ahan in waqti kororsi la rabo..”
Xildhibaan Maxamuud Axmed Ciise Run-sheeg oo katirsan Golaha Shacabka BFS oo la hadlay Warbaahinta Dowladda wauxuu beeniyay jiritaanka wararka sheegaya in Xildhibaannada ay wadaan muddo kororsi.
Xildhibaanka wuxuu sheegay in doodda Xildhibaannada ee qabashada Doorasho dadweyne aysan ka dhigneen in ay doonayaan waqti dheereysi, isaga oo hadalkaaas ku sifeeyay mid lagu carqadaleynayo rajada shacabka.
Golaha Shacabka ayuu sheegay inay ku jiraan Xildhibaanno waqti dheer kursiga ku fadhiya, kuwaas oo shaqada Baarlamaanka ka soo bilaabay Dowladdii Madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan ee Jabuuti lagu soo dhisay sanadkii 2000.
Shacabka ayuu sheegay inay rajeynayaan doorasho dadweyne si meesha looga saaro Odoyaasha iyo Ergada ku mataleysay codeynta Dowladda waayo iyo duruufo adag lagu soo mooday.
“Micnaha aan u leenahay dalka hala gaarsiiyo ma ahan in aan muddo kororsi rabno, tan iyo Dowladdii Carta Xildhibaannada waa la soo magacaabayay, waxaan dooneynaa in aan shacabka hortagno oo aan ka dalbano codkooda si isla xisaabtan iyo dabagal u dhaco, labada xulasho ee Guddiga Doorashada ee howsha lagu qabanayo waqti kororsi ma ahan, waana lasiin jiray Dowladihii dalka Soo maray” ayuu yiri Xildhibaan Run-Sheeg.
Xildhibaanka wuxuu sheegay in aan lagu dareen kicin waqtiga kooban ee howlaha doorashada lagu qabanayo oo soo jireen ahaa muddo labaatan sano laga joogo.
Shacabka ayuu ka dalbaday inay dulqaad sameeyaan si loo gaaro waqtiga lagu hirgelinayo doorashada awoodda codsiinta loogu soo gacangelinayo, lagana wareejinayo wakiiladii koobnaa iyo Odoyaasha dhaqanka sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan rabaa in aan xusuusiyo Shacakba Soomaaliyeed, tan iyo markii laga soo bilaabo Dowladdi Carta, marka la gaaro gunaadka waqtiga Dowladda, waqti dheeraad ayay qaadan jireen Dowladaha marka laga reebo Dowladdii Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf, Haddii 6 ama 8-bilood lagu gaarayo Doorasho Qof iyo Cod ah maxaa hoon ku xiray?” ayuu kusii daray Xildhibaan Maxamuud Run-Sheeg.
Dhanka kale Xisbiyada Mucaaradka iyo Siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba tuhun ah in Dowladda Federaalka ay damacsan tahay waqti dheereysi, marka la eego waqtigeeda sii dhamaanayo iyo doorashada ay ku hamineyso ee Qof iyo Codka ah, balse Madaxda DFS ayaa sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhaceyso.